हेर्नुहोस् प्रहरीको यस्तो हर्कत ! नेकपाको कार्यालयमा मध्यरात आक्रमण, इन्चार्ज बिसी गम्भीर घाइते — Sanchar Kendra
हेर्नुहोस् प्रहरीको यस्तो हर्कत ! नेकपाको कार्यालयमा मध्यरात आक्रमण, इन्चार्ज बिसी गम्भीर घाइते
आफ्नो कार्यालयमामाथि प्रहरीले युद्ध शैलीबाट अाक्रमण गरेको भन्दै बिसीले आपत्ती जनाएका छन् । गिरफ्तार तामाङसँगै कब्जामा लिएका सम्पूर्ण सामानहरु फिर्ता गर्न बिसीले माग पनि गरेका छन् । प्रहरीसँग भएको झडपमा परी इन्चार्ज बिसी गम्भीर घाइते भएका छन् ।